Dawlada Fedaraalka oo tallaabo ka xanaaqisay Kenya qaatay iyo Nairobi oo shirarkii laga weeciyay. – Xeernews24
Dawlada Fedaraalka oo tallaabo ka xanaaqisay Kenya qaatay iyo Nairobi oo shirarkii laga weeciyay.
24. September 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xassan ayaa Magalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya si rasmi ah u furay aqoon-iswaydaarsi ku saabsan Habka ay soomaaliya u yeelan la ahayd xog-kaydiye Ganacsi “Trade Information Portal”. Aqoon-iswaydaarsigan ayaa waxa ka qayb galey Maareeyahah Dekadda Muqdisho, masuuliyiin ka socotay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Ganacsiga iyo Warsshadaha oo hormuud ka ahayd abaabulka iyo isku dubbaridkaba.
Aqoon-iswaydaarsigan oo socon doona laba cisho ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshaha iyo IFC oo ka mid ah Bangiga Adduunka (World Bank Group), waxaana lagu qabtay xarunta dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa.
Shirkaan ay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Xukuumadda Soomalaiya ay ku qabatay Magalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya ayaa u muuqda in shirarkii dowladda Federaalka ee horay loogu qaban jiray Nairobi loo weeciyay dhinaca Addis-Ababa,waxaana tallaabadaan loo aaneynayaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya & Kenya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/somali-and-kenya.png 146 345 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-24 10:35:012019-09-24 10:35:01Dawlada Fedaraalka oo tallaabo ka xanaaqisay Kenya qaatay iyo Nairobi oo shirarkii laga weeciyay.
Kenya oo si adag uga jawaabtay Eedeyntii uga timid dowlada Jabuuti. Dhacdo Naxdin leh oo ka dhacday dalka Jabuuti,(Sawirro)